Nzube site na akpịrị akpịrị
Iji meziwanye nsonaazụ sitere na ọgwụ ọgwụ, ị nwere ike ịgụ nrọ na ekpere site na akpịrị akpịrị. Ha na-enyere aka mee ka ọnọdụ onye ọrịa ahụ dịkwuo mma, belata nhụsianya nke ihe mgbu na mmetụta ndị ọzọ na-adịghị mma, na-emekwa ka ahụ ike sikwuo ike. Ị nwere ike iji ememe anwansi n'oge dị iche iche ọrịa ahụ. Ọ dị mkpa ịnweta okwukwe na-enweghị mgbagha na arụpụta dị mma.
Mmanụ aṅụ na-agba izu site na akpịrị akpịrị
Iji nagide ihe mgbaàmà na ọrịa ndị na-adịghị mma, ị nwere ike ịme onwe gị ka ọ ghara ime ihe ọ bụla. Iji malite, ị kwesịrị ị na-eme tii ma ọ kacha mma ma ọ bụrụ na ọ na-eme si ọgwụ herbs. Mgbe tii na-eme ka obi di ala, tinye ya na mmanu anumanu n'ime ya ma kpoo ya. Mgbe nke a gasịrị, mmadụ kwesịrị ikwu ụdị nkwekọrịta dị otú ahụ:
"Ihe mgbu na-egbu egbu, obi ọjọọ ma na-agba oyi ka ọ kpoo dị ka mgbawa akọrọ! Ka akpiri m kwụsị ka ọrịa na udo dịrị m n'ikpeazụ! Nature - mama m, wepụ ọrịa gị maka ashberry uhie, ee maka osisi fir, ma hapụ m ka ọ hapụ ya ma ghara ijigide ọzọ! Ya mere, ya! Amen. "
Pii tii kwesịrị ịṅụ mmanya. Megharịa ememe ahụ kwa ụbọchị ruo mgbe ị gbakee.
Nzube maka akpịrị akpịrị na onye toro eto na akwa
A pụrụ iji ememe a mee ihe mgbe ọrịa ahụ abanyela n'ụdị siri ike. Iji mee ya, ịkwesịrị ịsaa àkwá 12 ma hapụ ha na mmiri ọkụ. Onye ga-eme ememe ahụ, kwesịrị iji mma dị n'aka na mgbe ọ na-agụ nkwekọrịta ahụ iji kpoo ya na akụkụ na-egbuke egbuke na ọnya nke onye ọrịa ahụ. Ogbe ahụ yiri nke a:
"N'ekpere gị na egbugbere ọnụ m, nne mama nke Chineke, m, Ohu nke Chineke (-ya) (aha nke m), gaa n'ihu na ọgwụgwọ. Site n'okwu ya, a na-achụpụ ọkụ na obi ilu si n'olu nke Servant (s) nke Chineke (-name) (aha onye ọrịa ahụ). M na-ewepụ ihe mgbu ahụ na-ere ọkụ, n'akụkụ niile ka ọ na-agbapụ ya na ikuku nke ifufe na azụ ọ gaghị ezute. Dika nrọ si bia, ya mere n'ututu echi a ka oria a gapu. Okwu m dị ike, ma ọ dị mfe. Site ugbu a na ruo mgbe ebighi ebi. Amen. "
Ọ dị mkpa ịkọwa okwu ndị ahụ n'ụzọ doro anya, n'egbughị oge, na-enweghị dọpụ uche, na-echebara okwu ọ bụla echiche. Mgbe nke ahụ gasịrị, akpịrị onye ọrịa kwesịrị kpuchie ya na nsen na-ekpo ọkụ. Ọganihu ga-adị mma mgbe nsen kwụsịrị. Site n'ụzọ, ọ dị mkpa ka a tụfuo ha.
Nzube maka akpịrị na nwa
Ọtụtụ mgbe, maka ọgwụgwọ nke angina na ụmụntakịrị, dọkịta na-atụ aro iji ọgwụgwọ ndị mmadụ, ebe ọ bụ na ha dị mma na nchekwa. Ememe a ga-eme site na onye ikwu ọbara, ọ kachasị mma ma ọ bụrụ nne ma ọ bụ nne nne. N'ime nwata ahụ ugboro atọ n'ụbọchị, a ga - agụrụ mkpesa a:
"Na aha nke Nna, Ọkpara na Mmụọ Nsọ. Amen! (ugboro ugboro ugboro atọ). Mkpụrụ obi m na-enye gị iwu, Ohu nke Chineke (aha gị) na ikike nke agbatị ezinụlọ wepụ ihe mgbu site n'akpa nwa m. Ma ọ bụrụ na ị gaghị ewere ya, m ga-eloda ya dum na dum. Amen. "
Ọ dị mkpa mgbe a na-akpọ mkpọtụ ahụ ka ị na-ekpofu mmiri mgbe niile, ọ dị mma ma ọ bụrụ na nwatakịrị ga-eme otu ihe a. A ghaghị ime mkpesa ahụ n'obere oge nke ihe dị ka awa ise. Tụkwasị na nke ahụ, a na-atụ aro ka ịmeghachi ekpere ahụ bụ "Nna anyị" maka nwa ahụ n'ụbọchị dum.
Ngụkọta dị mfe na akpịrị akpịrị
Ọ bụrụ na onye ọrịa ahụ gụọ ya ugboro atọ n'ahịrị ma ọ bụrụ na ọ gụchaa ọ bụla, ọ dị mkpa ka ọ gbụọ ọnụ na aka ekpe ma ọ bụ aka nri na-adabere na ebe akpịrị na-afụ ụfụ. Ọ bụrụ na a na-enwe ihe mgbu na n'akụkụ abụọ, mgbe ahụ, a ga-ahapụ ma ọ bụ na-agafe. Ebumnuche yiri nke a:
"A na-egbuke egbuke, nwa agbọghọ na-acha uhie uhie, na-agbanye mgbọrọgwụ na mgbọrọgwụ! N'ebe a, ị gaghị eme ya, aṅụla ọbara ọbara ọbara, agbajisị ọkpụkpụ ọkpụkpụ, ịpịla ụba nke ohu Chineke (aha). Gaa ebe anyanwụ na-adịghị enwu, ikuku anaghị afụkwa. "
Enwekwara nkwekọrịta site n'aka angina iji na-agba mmiri. A na-eme ememe a na ime ụlọ ịsa ahụ, na-azu azụ ma ọ bụ na-asa ahụ, ihe kachasị mkpa bụ ịnweta mmiri mmiri. A ghaghị ịmalite ịmalite tupu ọwụwa anyanwụ, ma ọ bụrụ na ọrịa ahụ apụta ìhè n'ụzọ doro anya na mgbede, ọ ka mma ime ihe niile mgbe anyanwụ dasịrị. Mepee mgbata ka mmiri na-asọ, wee malite ịgụ ebe ahụ:
"Dị ka anyanwụ, nke jupụta ụwa nke ụwa mara mma,
Ya mere enwere m obi ụtọ na ike.
Dị ka anyanwụ nke na-agafe agafe, ọrịa m ga-aga n'ala ndị dị anya,
Ma, ọ gaghị alaghachi. Amen. "
Tinyegharịa nkwekọrịta ahụ dị mkpa ugboro atọ na mgbe ịgụchi ọ bụla gbụọ na ntutu ahụ n'ubu, dabere na akụkụ nke ọnya ahụ na-afụ ụfụ karị.
Kedu ka esi aguta nkwekọrịta n'ụzọ ziri ezi?
Ogologo ụbọchị ole ka ọ na-aga?
Kedu ka esi tufuo spoilage na ọbụbụ ọnụ gị?
Ogige ndị na-acha odo odo
Kedu ihe obe a gbanwere?
Otu esi enweta ego n'onwe gi - ntuziaka
Kedu ka esi amata ima ịkọ maka otu ọnwa?
Ntube maka pin
Glycerin maka aka
Kedu ka esi gbasaa ihe a na-acha uhie uhie?
Kwuo ụbọchị mbụ
Kedu ka nkịta si egosi ahụike?
Nell Tiger Frey kpughere ihe nzuzo nke ọnwụ ya heroine si "Game nke n'ocheeze"
Ngwá dị arọ 2013
Kozolapie na ụmụaka - ọgwụgwọ
Jennifer Aniston gosipụtara ụzọ dị ukwuu nke ejiji na mbido nke eserese "Storks"
Otu esi mata na mmadu kpaliri - ihe iriba ama
Kedu ka esi akpọ nwa nwoke York?
Jacquard akwa akwa
Ejiji ejiji - mmiri-okpomọkụ 2015
Kedu ihe ị ga-ebuga na họtel ahụ?
Anya kpuru n'ime ime ụlọ ịwụ ahụ